Shiinaha Yaskawa Qabashada Robot Motoman-Gp12 warshad iyo soosaarayaasha | Jiesheng
Ku Yaskawa robot maaraynta MOTOMAN-GP12, a-Ujeeddo badan oo 6-gees ah robot, waxaa badanaa loo isticmaalaa xaaladaha shaqada isku dhafan ee iskuxirka otomaatiga. Xamuulka ugu badan ee shaqeynayaa waa 12kg, gacan ugu badan ee shaqadu waa 1440mm, saxnaanshaha boosku waa ± 0.06mm.
Ku Yaskawa robot maaraynta MOTOMAN-GP12, a Ujeeddo badan oo 6-geesood ah, waxaa badanaa loo isticmaalaa xaaladaha shaqada isku dhafan ee iskuxirka otomaatiga. Xamuulka ugu badan ee shaqeynayaa waa 12kg, gacan ugu badan ee shaqadu waa 1440mm, saxnaanshaha boosku waa ± 0.06mm.
Tani maaraynta aaladda leeyahay load-fasalka-koowaad, xawaaraha iyo curcurka la karka la ogol yahay, ayaa lagu xakamayn karaa YRC1000 kantaroolaha, waxaana barnaamij ka diyaarin kara shaashad fudud oo fudud ama sida shaashadda taabashada fudud ee Smart Pendant. Rakibaadda waa dhakhso oo wax ku ool ah, hawlgalkuna waa mid aad u fudud, kaas oo dabooli kara baahiyaha adeegsadayaal fara badan sida qabashada, gundhigga, isu-geynta, nadiifinta, iyo farsamaynta qaybaha badan.
Robot-ka taxanaha ah ee GP-ga wuxuu isku xiraa manipulator-ka koontaroolaha kaliya hal fiilo, oo si fudud loo dejin karo, isla markaana yareynaya kharashka dayactirka iyo qeybaha dayactirka. Waxay leedahay raad yar waxayna yareysaa faragelinta qalabka durugsan.
Iyadoo la sii wanaajinayo waxtarka wax soo saarka isticmaalaha, waxaa sii kordhaya baahida loo qabo aalado aalado culeys sare leh, xawaare sare leh, iyo saxnaan sare oo suuqa ah si loo gaaro goobo fudud illaa heerka ugu badan. Iyada oo laga jawaabayo dalabkan suuqa, Yaskawa Electric waxay dib u habayn iyo casriyeyn ku samaysay qaab-dhismeedka farsamaysan ee moodelkii asalka ahaa, waxayna soo saartay jiil cusub oo ah GP-yo yar yar oo taxan ah oo culeyskiisu yahay 7-12 kg, kaas oo kula tacaali kara noocyo kala duwan oo hawl ah saxnaanta hawlgalka ugu sareeya.
Hore: Yaskawa Motoman Gp8 Handling Robot
Xiga: Yaskawa Lix-dhidibka Qabashada Robot Gp20hl
Qabashada Gacanta Robot, Aaladda otomaatiga ah ee Robot, Robotka Gacanta otomaatiga ah, Nidaamyada Maaraynta Qalabka Robotka, Warshadaha Qabashada Warshadaha Gacanta, 6 Axis Qabashada Robot,